Ukuchithwa kweThandi yeTyhuni yokuThuthuka okuTshisayo kunye neRF yoHulelo lweNkqubo
Ikhaya / izicelo / Ukukhutshwa kweeNkcazo / Induction eshushu Yenza iTitanium Intonga
Udidi: Ukukhutshwa kweeNkcazo tags: intonga eshushu yokwakha, eshushu esenza titanium, Ukwenza kushushu kushushu, ukuchithwa okutshisa isithando somlilo, umatshini oshushu wokwakha oshushu, induction eshushu yokwakha intonga
Ukuchithwa kwe-Titanium Rod yokuThuthuka okuTshwayo okuTshwayo kunye neRF Induction Equipment Heating Equipment
Injongo Ukutshisa intonga ye-titanium ukuya kwi-1700 ° F (926.7 ° C) kwimizuzwana engama-60 yokwenza ubushushu.
Izitriki zeTitanium, i-1.25 "(31.8mm) ububanzi, i-5" (127mm) ubude
Ukushisa 1700 ° F (926.7 ° C)
Ukuphindaphinda 70 kHz
Izixhobo • Inkqubo ye-DW-HF-60kW yokufudumeza, ifakwe kwintloko yokusebenza ekude.
Inkqubo I-coil ye-helical induction eyenzelwe ngokukodwa isetyenziselwa ukufudumeza intonga ye-titanium ukuya kwi-1700ºF (926.7 ° C). Kusetyenziswa iipyrometers ezimbini zamehlo ukulinganisa ubushushu kumphezulu nakwiziko lendawo. Zombini umphezulu kunye neziko lentonga ye-titanium zitshisiwe ukuya kwi-1700ºF (926.7 ° C) kwimizuzwana engama-60.
• Ukuphucula amazinga okuvelisa kunye neziphoso ezincinci
• Iipropati zokucwangcisa eziphuculweyo